Shir looga hadlay badaha Soomaaliya - BBC Somali - Aqoon Guud
Shir looga hadlay badaha Soomaaliya
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 Maarso, 2013, 19:31 GMT 22:31 SGA
Shir looga hadlay kalluumaysiga sharci-darrada ah ee maraakiibta caalamigu ka wadaan badaha Soomaaliya ayaa lagu qabtay Addisababa.
Kalluun badan ayaa laga gurtaa badaha Soomaaliya iyadoo aysan jirin ciidamo ilaaliya.
Kulan ay soo qabanqaabiyeen Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub, loogana hadlaayo sidii looga hortegi lahaa kalluumaysiga sharci-darrada ah ee maraakiibta caalamigu ka wadaan badaha Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Adis ababa ee dalka Itoobiya. Kulankaas waxaa ka qaybgalay masuuliyiin iyo garyaqaano ka socday Dawladda Federalka Somaaliya, maamullada Puntland, Somaliland, iyo Galmudug.
Cabdiwaaxid Maxamed Xirsi oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda kalluumaysiga Puntland kana qaybgalay shirkaas wuxuuna u waramay wariyaha BBC Axmed Maxamed Cali.